You searched for mahatoky - FJKM Amparibe Famonjena
May 2020>Mahatoky izao teny izao «Ankatoavy ny fitarihan’ny Fanahy Masina» Tsianjery : “Ny Fanahin’ i Jehovah no mampiteny ahy, ary ny teniny no eo amin’ ny lelako”. II Samoela 23,2 Koa satria nomena antsika ny Fanahy Masina ahazoantsika mamoa voa tsara mendrika ny mpanompo tsara, dia anjarantsika kosa ny mankatoa ny bitsiky ny Fanahy sy ny …
Continuer la lecture de « May 2020>Mahatoky izao teny izao »
Mahatoky Septambra 2019
«Manompoa ny Tompo amin’ny fahamasinana» Tsianjery : «Miezaha mitady fihavanana amin’ny olona rehetra ary fahamasinana; fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo ». Hebreo 12 :14 Masina Andriamanitra Masina Andriamanitra ka tsy tokony hasiana ady varotra ny fepetra rehetra apetrany amin’ny fanajana ny fanompoana Azy. (Eks. 12:15-17) Masina Andriamanitra ka tsy tokony haroharoina …
Continuer la lecture de « Mahatoky Septambra 2019 »
LISITRY IREO MAHATOKY REHETRA Azonao jerena ireo mahatoky izao teny izao rehetra eto anivon’ito pejy ito Mahatoky volana Jolay 2019 : Manatrika ny mino ny Tompo Tsianjery : Matio 18 : 20 : « Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny Anarako, dia eo afovoany Aho » Hamaky manontolo Ireo Mahatoky teo …
Continuer la lecture de « Mahatoky rehetra »
Mahatoky jolay 2019
Jolay 2019 manatrika ny mino ny Tompo Manatrika ny mino ny Tompo Tsianjery : Matio 18 : 20 : « Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny Anarako, dia eo afovoany Aho » Endrey ny hatsaram-pon’Andriamanitra, ry Havana, fa mahatsapa ny fiasan’ny tanany mahery isika tamin’ny namenoiny antsika ny Fanahy Masina. …
Continuer la lecture de « Mahatoky jolay 2019 »
ALAHADY FAHA 14 FEBROARY 2021 MAMPIORINA NY MINO NY TENIN’ANDRIAMANITRA “Ary hoy Izy: Izany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona Ahy, raha tsy nomen’ny Ray azy izany.” Jaona 6 : 65 Misaotra ny Tompo lalandava isika fa afaka niray fo sy fanahy ary niombom-bavaka teto an-tranon’Andriamanitra, androany faha 14 febroary 2021. Ity …
Continuer la lecture de « Alahady 14 febroary 2021 »
ALAHADY 31 JANOARY 2021 “Maneho ny maha Andriamanitra Azy ny Tompo ” Ny fotoana faharoa tamin’ny 10 ora no nakana izao tatitra izao. Fotoana notarihin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy ary natokana ho an’ny marary hoditra. RAVONIARISON Manda, Mpitandrina, no nitarika ny fanompoam-pivavahana. RAMILISON Diamondra, Mpitandrina miana-draharaha, no nitondra ny hafatry ny Tompo. Ny Marka 1: 40-45 no Tenin’Andriamanitra …
Continuer la lecture de « Alahady 31 janoary 2021 »
Alahady faha-13 Desambra 2020 IVOM-BOKATRY NY SAMPANA SEKOLY ALAHADY « Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino »« Koa mahereza ianareo, fa aza miraviravy tanana ; fa hisy valim-pitia tokoa ny hataonareo » II TAN 15 : 7 Ny fotoam-bavaka faharoa tamin’ny 10 ora maraina izao noraisina an-tsoratra izao. Alahadin’ny ny sampana Sekoly Alahady « Antoky ny famonjena » …
Continuer la lecture de « Alahady 13 desambra 2020 »
ALAHADY 06 SEPTAMBRA 2020 » Miasà amin’ny fahatahorana an’ Andriamanitra « Ny fotoam-bavaka voalohany tamin’ny 7 ora maraina izao noraisina an-tsoratra izao araka ny fandaminana ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana. Andriantsilavina Nofy, Mpitandrina miana-draharaha no nitarika ny litorjia. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahana. …
Continuer la lecture de « Alahady 06 septambra 2020 »
ALAHADY 30 AOGOSITRA » MAHATOKY HATRAMIN’NY FAHAFATESANA NY MINO « Alahady natokana itondrana am-bavaka ny Akany fialofana Tangaina. Alahady farany ibanjinana ny lohahevitra “Mahatoky hatramin’ny fahafatesana ny mino” ; Alahady faha roa ambin’ny folo (12) manaraka ny Trinite ; Alahady natokana itondrana am-bavaka ny Akany fialofana Tangaina ; Ny Mpitandrina ANDRIANTSILAVO Nofy no nitarika ny fotoana ; Ny Mpitandrina …
Continuer la lecture de « Alahady 30 aogositra 2020 »
Alahady 23 Aogositra 2020 « Mahatoky hatramin’ny fahafatesana ny mino.« Alahady 23 Aogositra 2020. Ao anatin’ny fotoana fankalazana ny faha 52 taonan’ny Fjkm moa ankehitriny. Atoa Andriamasinoro Tantely no nitarika ny fotoana. Atoa Razafindrakoto Alain sy Rtoa Razafindrakoto Tatamo no nanao ny vavaka sy ny vakiteny ary ny mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatra. Hieno …
Continuer la lecture de « Alahady 23 Aogositra 2020 »